Tanora manao rastà na manao tombokavatsa ao Nizeria? Mety hanorisory sy hamono anao ny polisy · Global Voices teny Malagasy
Polisy miasa ivelan'ny lalàna ny SARS
Voadika ny 12 Avrily 2019 4:47 GMT
Nitatitra izy ireo fa handeha hijery ny lalao Premier League Anglisy teo amin'ny Liverpool sy Tottenham tao amin'ny toeram-pisotroana ao Mangoro/Onipetesi ao an-tanànan'i Lagos i Johnson raha iny nisy “fiara fitaterana ara-barotra tsy nisy marika” nandalo mitady ireo tanora tsy manara-dalàna – izay nisian'ny vahoaka marobe. Hoy ny tatitra:
Fantatra amin'ny tsy fanasaziana azy ireo sy ny fanitsakitsahana ankarihary ny zon'olom-pirenena Nizeriana ny vondrona SARS ao amin'ny Polisy Nizeriana. Namaritra ny SARS ho toy ny “sampana polisy miasa ivelan'ny lalàna” izay nampiasa ny fampijaliana ho “fitaovana hahazoana fiaikena sy kolikoly” ny tatitry ny Amnesty International tamin'ny taona 2016.
Ao Nizeria, ny @PoliceNG alefa ao amin'ny SRAS dia matetika heverina toy ny “matsiro” ary ialohavan'ny fandresen-dahatra goavana ataon'ny manamboninahitra. Indraindray ireo manamboninahitra mandoa vola N300.000 amin'ireo manampahefana ambony misahana ny famindrana mba hidirana ao amin'ny SARS. #EndSARS
My Kaylo Boy is gone! My ‘Lion’ … my chef… my precious Kolade Johnson… I'm so sorry it ended this way… I'm sorry i wasn't there to stop the bleeding… I'm sorry the government failed you… I'm sorry 💔#EndSARS pic.twitter.com/N0wsMQrYUK
Maty i Kaylo Boy! ‘Lionako’ … lehibeko… Kolade Johnson sarobidiko… Miala tsiny aho raha nifarana toy izao izy ity… Miala tsiny aho fa tsy teo nanakana ny fandehanan-drà… Miala tsiny aho tsy nahomby ny governemanta… Miala tsiny aho 💔
RIP Kolade Johnson na i KayLow #KLOW na i Don Styles. Vao tamin'ny maraina teo isika no niresaka momba ny fandefasana vola any amin'ny zanakao lahy Jason. Mpiady tsara fanahy, tia vazivazy, olona ary namana lehibe. Tsy ho afa-bela ny mpamono anao.
Nanafika ny toeram-pisotroana ny polisin'ny SARS tamin'ny alahady niaraka tamin'ny fikasana hisambotra ireo “sekta” fantatra amin'ny tombokavatsa na rastà. Mihevitra ny polisin'i Nizeria ao amin'ny fanjakana Lagos fa tsy maintsy samborina ireo “tanora manao rastà sy tombokavatsa eo amin'ny vatany” satria “mifamatotra amin'ny angetsangetsan-tsoratra (cultisme) ny zavakanto ara-batana” ary “hafahafa amin'ny kolontsaina [Nizeriana].”
Endri-panehoana ara-kolontsaina mahazatra izay talohan'ny kolonialisma any amin'ny faritra sasany any Afrika ny tombokavatsa – na ny fandidididiana tarehy – Manamafy ilay Nizeriana manam-pahaizana, Taiye Aluko fa “mampiavaka indrindra ny kolontsaina Yoruba any atsimo-andrefan'i Nizeria ny tombokavatsa sy ny fandidididiana”. Tahaka izany koa, ny Igbo any atsimo-atsinanana dia manatanteraka ny fanaovana tombokavatsa amin'ny vatana na Ichi amin'ny fampilaharana ireo zokiolona sy ny Uli izay faritan'ireo manam-pahaizana fa “loko indigo nampiasaina hanatsarana ny vatan'ny olombelona.” Ao amin'ny Haussa any avaratr'i Nizeria, antsoina hoe Zani ny endri-bolo miaraka amin'ny fandokoana manga sy saribao fingotra manamarika ny fokony. Manana dada, ankizy teraka miaraka amin'ny rastà voajanahary ihany koa ny Igbo sy Yoruba.
Nanangana ny hetsika #EndSARS ilay mpikatroka Segun Awosanya satria leon'ny fampijaliana mitohy, ny fakàna vola sy ny famonoana ny tanora izy:
— SEGA L’éveilleur®🚨 (@segalink) April 1, 2019
Nitombo ny End SARS avy amin'ny tenirohy #EndSARS tamin'ny hetsika ara-tsosialy sy vondrona mpisolovava izay mampiasa ny Twitter hatrany mba hanaraka ny fihoarampefy ataon'ny SARS. Matetika miresaka amin'i Awosanya amin'ny alàlan'ny alàlan'ny Twitter-ny (@segelink) ireo tanora Nizeriana niharan'ny fanorisorena ataon'ny polisy ary saika amin'ny tranga rehetra, miditra an-tsehatra sy manome fanohanana ny vondrona mpanandratenin'i Awosanya.
Ny fitarainan'ny haino aman-jery sosialy nateraky ny fanentanany no nahatonga ny Filohan'i Nizeria Muhammadu Buhari hanome baiko amin'ny “fandaminana indray ny ekipa manerana ny firenena, ka nihetsika ireo mpitarika ambony ao amin'ny polisy amin'ny fanavaozana indray ny SARS amin'ny fomba ivelany.